Tobanaan kun oo bukaan ah ayaa halis ku sugan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tobanaan kun oo bukaan ah ayaa halis ku sugan
La daabacay måndag 10 juni 2013 kl 14.46
Isbitaalka jaamacadda Skåne oo ku yaal Malmö. Sawirle: Johan Nilsson / SCANPIX
Tiro kor u dhaaftay kala bar oo bar 300 000 qof oo bukaan ah oo laga helay in uusan wadnahoodu caadi u shaqayneyn ayaa la siiyey daawo qalad ah amase aamba la siin wax daawo ah. Sidaasna waxaa lagu muujiyey qoraal ay soo saartay hay’adda dowliga ah ee ku hawllan qiimeynta arrimaha caafimaadka oo loo soo gaabiyo SBU.
Caalin ka hawlgala isbitaalka jaamacadda Skåne oo lagu magacaabo Peter J Svensson wuxuu sheegay in ay suuroobi lahayd in la badbaadiyo dad gaaraaya 1000 qof sannadkiiba haddii dadkaas bukaanka ahi ay heli lahaayeen daaweyn sax ah.
Dadka garaaca wadnahoodu uusan caadiga ahayn waxay khatar weyn ugu sugan yihiin in dhiig maskaxda uga furmo. Sidaas awgeed ayey habboon tahay in la siiyo daawo dhiigga khafiifisa sida warfarin. Daawani waxay ka hortagtaa in dhiiggu xinjiroobo oo marinada dhiigga isku xiro. Laakiin hadda in ku dhow boqolkiiba 55 ayaan la siin wax daawo ah ama la siiyaa daawo qalad ah. Dumarka aan helin daaweyn sax ayaa ka badan ragga. Laakiin Peter J Svensson wuxuu sheegay in aan lahayn jawaab dhab ah oo arrintaas ka turjunta.